Imikhiqizo isetshenziselwa ukuhlaziywa kwensimbi okuyigugu, ukuhlolwa kwezimayini kwelebhu, okulondoloziwe kokutholwa kanye nokudla kwegolide. Izinto ezibonakalayo ze-Fire Assay Crucibles ziyi-fireclay exutshwe nezinye izinto zokuvuselela, zingamelana nokushisa kuze kube yi-1300 ℃. Banokumelana okuhle nokuhlaselwa kwe-flux, ukuguguleka, ukuqhekeka kanye nokushaqeka okushisayo.
Njengomenzi onamandla ochwepheshe womlilo onobuhlakani enobuhlakani neCuplel, sinamamitha-skwele angama-7000 amasha wefektri entsha enomugqa wokukhiqiza othomathikhi.
Inkampani ihlala inamathela ekusindeni kwekhwalithi, ukusungulwa okusha kanye nentuthuko, ubuqotho bomkhiqizo, ukuvikela kanye nokucabanga kwamabhizinisi wezemisebenzi ngemuva kwenhloso. Kuyo yonke le minyaka, imikhiqizo yethu ithengiswa kahle ezweni lonke, futhi yathunyelwa eJalimane, e-United States, eBrazil, eRussia, amazwe angaphezu kwama-20, ikhwalithi yomkhiqizo idunyiswe kakhulu ngamakhasimende.
"Ikhwalithi ephezulu, intengo ekhethekayo" ukuphatha kwethu i-tenet. Silindele ngobuqotho ukubambisana nobuningi bamakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe, ukuthuthukiswa okuvamile! Uyemukelwa ukuvakasha nokuphenya inkampani yethu.